आमूल परिवर्तन (निबन्ध) – Chitwan Post
आमूल परिवर्तन (निबन्ध)
एकदिन म नवलपुरतिर आउन घरबाट निस्किएर ओरालो बाटो खुत्रुक खुत्रुक झर्दै राधाकृष्ण मन्दिरनेर पुगेको थिएँ । सिमसिम पानी पर्न थाल्यो । छाता खोलेर ओढेँ । त्यसै पनि काठमाडौँका अधिकांश बाटाहरु कि मान्छेका घुँडाघुँडासम्म आउने हिलाम्मे कि चिन्नै नसकिने गरी धुलाम्मे । उस्तै खाल्टाखुल्टी पनि, यसबाट सायद बालबनिता, युवावृद्ध कोही अनभिज्ञ छैनन् । त्यसै पनि साउने झरी । हिलाम्मे सडकमा बेसोमती पारामा चल्ने जनसङ्ख्याकै हाराहारी सवारीसाधन र त्यसले उछाल्ने हिलो र धूवाँको मुस्लोको कथा अलग्गै । हरसम्भव तिनैलाई छल्दै र बच्दै सावधानीपूर्वक हिँड्दै थिएँ म त्यस्तै बाटो । अनायास मोबाइल गुन्ज्यो । जेनतेन गोजीबाट निकालेँ, हेरेँ, मेरा मित्र रामप्रसाद ज्ञवालीजी । किन सम्झनुभयो होला मलाई भन्ने लाग्यो । मनमा पनि वर्षाका च्याउझैँ भनौँ या पानीको फोकाझैँ असङ्ख्य उहापोह पैदा भए र कतै विलीन भए ।
संवाद आरम्भ भयो । अनौपचारिक कुशलक्षेमपश्चात् उहाँले एउटा पत्रिकाको निम्ति निबन्ध पाए हुन्थ्यो भन्नुुभयो । म त्यस्तो निबन्धकार होइन भनेँ, तर उहाँले जेजस्तो भए पनि लेखेर दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँको अनुरोधलाई हार्दिकतापूर्वक स्वीकार त गरेँ, तर समय छोटो हुनाले र विषयवस्तु पनि के चयन गर्ने भन्ने यकिन भइनसकेको मजस्ता व्यक्तिका निम्ति त्यो आत्मस्वीकृति समस्या पो बन्ने हो कि ! म सोच्दै बस कुर्ने सडकनेर आइपुगेँ । त्यहीँ सडकछेउ उभिएरै यात्रुबसको प्रतीक्षा गर्न थालेँ । अघिदेखि के संवाद भइरहेको थियो थाहा भएन, तर म पुगेपछि भने सब्जीवाला ग्राहकसँग भनिरहेथ्यो “तपाईहरु भुजा लिनुहुन्छ, म खाना खान्छु । तपाईं महलमा बस्नुहुन्छ, म त अँध्यारो बुइँगलमा । म दिनहुँ तपाईंकी छोरी कुकुरको गोठालो गर्दै सडकमा मार्च पास गरिरहेको देख्छु, तर मेरी छोरी उता गाउँमा गाईबाख्राको गोठालो गर्न अर्काको घरमा बसिरहेकी छे । साहब ! म आपूmलाई भाग्यमानी भनूँ कि अभागी ? दिनहुँ उही पुरानै बासी अनुहारहरु हेर्दै यता ‘आउलान् या नआउलान्’, ‘आए पनि किन्लान् वा नकिन्लान्’, ‘दलाली गरेर वाक्क लाउने पो हुन् कि’, ‘नबिकेर त्यसै सडेर पो जाने हो कि’, ‘कोठाको बहाल तिर्न पनि नपुग्ने पो हो कि’ आदि इत्यादिको द्विविधामा यहाँ उभिरहेको हुन्छु ।” सुनिरहेको ग्राहक बीचबीचमा कुटिलतापूर्वक हाँस्थ्यो, तर तरकारी छान्ने र जोखाउने काममा पनि लागिरहेकै देखिन्थ्यो ।
गाडी आयो । म रवाना भएँ । मलाई लाग्यो, यो थियो साँच्चै वर्तमान नेपाली समाजको परिदृश्य । जुन वर्गीय असमानताको खाडल झन्झन् पुरियो भन्दा उतिउति गहिरो हुँदै गएको एउटा बिम्ब । सामन्तवादी तथा पुँजीवादी चिन्तनको अवैध सन्तान । अरु रुख चढेको देखेर आपूm धुरी चढ्न खोज्ने प्रायः हामी नेपालीको स्वभाव हो । कुल घराना भनिएकाहरुले जापान, युरोप र अमेरिकातिर घुम्न जाँदा त्यताकाले कुकुर पालेको देखे । उतैबाट किनेर ल्याए र पाल्न थाले । उनीहरुको रोसरवाफ, ठाँट देखेर लोभिएका गरिब मान्छे पहिले भेँडाबाख्रा, गाई, भैँसी चराएर जीविका चलाउने मान्छेहरु कुनै उपायले धनी भएपछि आपूmहरुले पनि उनीहरुकै सिको गरे र गाईभैँसी र भेँडाबाख्रा पाल्नुको सट्टा कुकुर पाली त्यसैको गोठालो गर्न थाले । कसैले घरमा कुकुर पाले चोरी डकैतीबाट मात्र नभई मगन्त नारायणबाट पनि रक्षा गर्छ भन्ने तर्क गरे । कदाचित यो सही लाग्छ पनि । तर यो सदा सत्य भने होइन भन्ने लाग्छ । प्रायः कुकुर पालेकै घरहरुमा सफलतापूर्वक चोरी भएका घटना सुनिएको छ । त्यसमा पनि प्रहरी निरीक्षक, उपरीक्षक आदि इत्यादिहरुकै घरहरुमा । निकै आक्रामक मानिने भोटे कुकुरलाई पनि एक टुक्रा मासु फाल्दिए तुरून्त उसको आवाज बन्द । घरकै रक्षाका निम्ति त महँगाभन्दा घरेलु नै उत्तम, जो न्यूनतम स्याहार र सुविधाले पनि उच्चतम प्रतिफल दिन सक्छ तर यस्तो गर्ने हिम्मत कुन सम्भ्रान्त र नवसम्भ्रान्त सहरियामा होला र ?
नेपालीको जीवनशैलीमा आएको यो आमूल परिवर्तन अचम्मलाग्दो छ । जराबाटै पलाएकालाई त येनकेन सुहाउँदो पनि हो, तर “टुप्पाबाट पलाएकाहरुमा भने धेरै स्वाङ, ढर्रा र फुर्तीफार्ती नै ज्यादा हुन्छ” त्यसै भनेका होइन रहेछन् बूढापाकाले । गाईबाख्रा पाले लाभ हुन्छ, तर कुकुर पाले आची सोहोर्नु र त्यसको नोकर हुनुबाहेक के लाभ ? उल्टो हुँदै छ चलन । कुकुरले पो मान्छेको चाकरी गथ्र्यो । कुइँकुइँ गरेर पुच्छर हल्लाउँदै मालिकहरुका अघिपछि घुम्थ्यो, चाट्थ्यो र दासत्व दर्साउँथ्यो । उसको चाकरी देखेर मालिक पनि मक्ख पर्थे । आश्चर्य ! कुकुरले पनि कुनै न कुनै दिन मेरो पालो नआए पनि छोरानातिका पालोमा, त्यो नभए पनि कुनै न कुनै हाम्रो जातिको भए पनि यिनीहरुमाथि राज गर्ने, यिनलाई नभए पनि यिनका सन्तानलाई दास बनाइछाड्ने अठोट राखेको थियो वा थिएन कुन्नि, तर आज तिनै कुकुरले मानिसलाई नै दास बनाइरहेछन् र दिसापिसाब सोहोर्नेदेखि छोराछोरीलाई भन्दा पनि कोमलतापूर्वक स्याहार गर्ने तुल्याइरहेछन् । म बिहान र साँझपख कुकुरले घिसारिरहेका मान्छे देख्छु । मलाई औधी टीठ लाग्छ । मानौँ, मान्छेले ठूलो अपराध गरेछ र कुकुरले चोरलाई झैँ यसलाई घिसारेर हिँडिरहेछ । एकदिन मैले यो प्रसङ्ग कोट्याउँदा प्रिय अनुज ईश्वरी खनालजीले “यो त प्राणीप्रतिको अपार प्रेम पो हो नि गुरूजी” भन्नुभयो । मैले पनि “ए, त्यसो भए तिनै मान्छेले अरुका बस्तुभाउ फुकेर आँगन कुल्चनेबित्तिकै ठाड खुस्कने गरी किन डामेका होलान् ?” भनेँ, तर उहाँ बोल्नुभएन मात्र मुस्कुराउनुभयो ।
असार ३० गते जस्तो लाग्छ, मौसम अनुकूल नै देखेर म छाता नबोकी बजारतिर निस्केको थिएँ । अनायास मेघ भेला भए र भारी वृष्टि गर्न लागे भनेर हतार–हतारमा फर्कंदै थिएँ, तथापि घर आइपुग्नै भ्याइनँ र एउटा पसलको पिँढीमा उक्लेर ओत लागेँ । त्यो पसल रहेछ कुकुर नै बेच्नेदेखि उसलाई आवश्यक यावत् सामग्री बेच्ने पसल । झन्डै पैँतालीस मिनेट जति अविरल वर्षा भइरहेकाले हिँडिहाल्ने अवस्था पनि थिएन । बरू, कुकुरबारे जानकारी नै लिनु ज्ञान र व्यवहार दुवै दृष्टिले उचित ठानेँ । यस्तैमा एउटी महिला निथु्रक्क भिज्दै उसैका निम्ति आहारा लिन आइन् र प्रोटिनयुक्त बिस्कुट लिएर गइन् । त्यसको मात्रा र वस्तुको नाउँ सुन्दा हामीले खाने उच्च मूल्यको बिस्कुटहरुभन्दा पनि निकै चर्को लाग्यो । मैले कुकुर, साबुन, काइँयो, पेटी, साङ्ली, तेल आदि इत्यादिको निकै खारेरै मूल्य सोधेँ । कुनै झर्को र दिक्क नमानी सरलतापूर्वक जवाफ दिइरहिन् उनले । यसैले पनि मैलै प्रायः हरेक वस्तुको नाउँ, मूल्य र उपयोगबारे सोध्ने धृष्टता गरिरहेथेँ ।
ती वस्तु र मानिसले उपयोग गर्ने वस्तुको मूल्य दूरी निकै लामो लाग्यो । मैले कुकुर पाल्ने धेरै मान्छे देखेँ । आपूm नखाने, बुबाआमालाई फलपूmल नकिन्ने, छोराछोरीलाई अखाद्य चाउचाउ खुवाउने, तर कुकुरलाई भने उच्च अर्गानिकयुक्त प्रोटिन, क्याल्सियम आदि त¤वले भरिएका पोषिलो ब्रान्डेड बिस्कुट खुवाउने !
अहिलेको बजार मूल्यमा प्रायः जापानी जातका कुकुरका लागि सात हजारभन्दामाथि मूल्य लिने गरिएको पाएँ । यो परिवेश र व्यक्ति हेरी नानाथरी मूल्य पनि हुनसक्छ । त्यसो त, प्रहरी अपराध महाशाखाले अपराधी पहिल्याउन उपयोग गर्ने प्रजातिको कुकुरको मूल्य अझ चर्को हुँदो हो । ‘जीवन एक प्राध्यापक’ निबन्धमा शङ्कर लामिछानेले कुकुरमा अद्भुत घ्राण शक्ति हुने हुँदा ऊ यसैका आधारमा सम्मानित भइरहेको ठान्दछन् । कुकुर बुढेसकाल लागेपछि उसमा वैराग्य प्राप्त हुन्छ । यसैले, ऊ एकान्तप्रिय बन्छ । मालिक पनि नचिनेको अभिनय गर्दछ । हो, उसले नैसर्गिक कुकुरबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छ ।
नेपालकै भोटे कुकुरको मूल्य पनि झन्डै एक लाखभन्दा बढी पर्ने एकदिन अनलाइन खबरले लेख्यो । मैले रसियन न्यूज हेर्दा पश्चिमाहरुले कुकुर पालेजस्तै गरी त्यहाँ एक प्रजातिको सुँगुर पाल्ने गरेको देखेँ । आश्चर्य लाग्यो र सोधेँ, रसिया बसेर आएका एक जना साथीलाई । उनी पहिले मुस्कुराएर अनि एकछिनपछि उनको मुखबाट ‘हो’ को ध्वनि इथरमा गुञ्जायमान भयो । हामीकहाँ एकताका तागाधारीका निम्ति स्पर्श गर्नसमेत निषेधित मानिएको यसलाई च्यापेर हिँड्ने, बैठक कोठादेखि शयनकक्षमा प्रवेश दिने, बिस्तारामा समेत राख्ने र सुत्न दिन भन्ने त झन् समझबाट बाहिरको विषय थियो, तर अचम्म ! अहिले बिस्तारै त्यही रूचिको विषय कतिपयका निम्ति जिब्राका लागि रूचिकर बन्न थालेको छ । एउटा कुरा पक्का हो कि यसलाई पालनपोषण गरे लाभैलाभ तर कुकुर ? यसले वस्तु, विषय र चिन्तनलाई हेर्ने दृष्टि पनि देशकाल र समाजसापेक्ष हुँदोरहेछ भन्ने देखाउँछ ।
हाम्रो समाजमा बिरालो प्रायः प्रिय मान्ने चलन छ । त्यो पनि बच्चाहरुका निम्ति ज्यादा । त्यसैले कवि दीपक सोतीले लेखे– “म्याउ म्याउ बिरालो मुसा मारी खाऊ…” तर बिरालोका लागि कुकुरलाई झैँ कुनै प्रकृतिको आर्थिक, कालिक तथा भौतिक व्यवस्थापन गरिरहनुपर्दैन ।
फेरि पनि कुकुरतिरै फर्कूं । पूर्वीय पौराणिक ग्रन्थ भन्छ, द्वापर युगको अन्तिम घडीमा पाँच पाण्डवले कुकुरलाई सँगै लिएर स्वर्गद्वारी हुँदै स्वर्ग प्रस्थान गरे । कुकुर यमदूत हो, जसले दूषितात्मालाई यमराज अघि उपस्थित गराउँछ । यसैले, यमपञ्चकमा कुकुरलाई पनि प्रेमपूर्वक सम्मान गरिन्छ । चन्द्रमाको अनुसन्धानका क्रममा सर्वप्रथम त्यहाँ जीवको उपस्थिति सम्भव छ वा छैन भन्नेबारे निष्कर्ष निकाल्न लाइका (कुकुर) पठायो ।
तर पनि कुकुर आलुजस्तै सधैँ अपमानित छ । आलुलाई काँचै थिचेर अचार बनाउने, उसिनेर अचार बनाउने, उसिनेर त्यसैको दाल बनाउनेदेखि हरेक तरकारीमा प्रायः अपरिहार्य रहेको आलुलाई कम मूल्य आँक्तै प्रायः विद्यार्थीलाई रिसाएर भन्नुपर्दा ‘आलु खालास् नि’ फेल भए ‘आलु खाइस्’ आलु खाइछस्, ‘आलु खाइछेस्’ भन्ने चलन छ । हो, त्यस्तै बुझाइ र हेराइ छ कुकुरप्रति पनि । जुन प्राणी मान्छेका निम्ति अपरिहार्य छ । उसैलाई गालीगलौच गर्नुपर्दा वा हप्काएर भन्नुपर्दा ‘तँलाई कुकुर वा कुकुर्नी’ ‘ए कात्तिके कुकुर’, ‘कात्तिके कुकुरझैँ बरालिँदै हिँड्छ’ आदि इत्यादि । गुरूले कक्षामा गाली गर्दा पनि मुख फोरेरै भन्ने गर्नुहुन्छ ‘कुकुर’ । हुन त, एककिसिमले ‘सालो र साली’ भनेपछि भिनाजुको गालाको छालामात्र त के शरीरका हाड र रोमकूपहरु पनि हाँस्छन् र रोमाञ्चित हुन्छन् । त्यति प्रिय ‘सालोसाली’ शब्दलाई पनि कसैलाई खसालेर भन्नुपर्दा ‘ए साले, साले कुकुर’ किन भनिने गरेको होला ? अचम्म लाग्छ ! प्यारो भएरै आलु र कुकुर पनि बारमासे जुवाडे, ठग, बदमास, भनिएको काम नगर्ने मान्छेलाई गाली गर्नुपर्दा तिनको नाउँ काढिने गरेको ?
बिनाकाम भुकिरहने, फोहोर सडेगलेका वस्तुदेखि दिसासमेत खाने, धूलोमैलो र फोहोरमा बस्ने भएकैले छाडा पाल्तु कुकुरलाई यसरी घृणा गरिएको होला । तर, जुन अङ्गमा विष लागेको हो त्यही अङ्ग काटेर फाल्नुपर्नेमा पूरैलाई त्याग्नु र एउटा बिराउने शाखा पिराउने हुनु हाम्रो संस्कृतिको पर्याय भएको छ भन्दा अतिव्याप्ति दोष नहोला । त्यसैले होला, अधिकांश नेपाली कुकुर भनेपछि त्यसै पनि डराउँछन्, त्यसमा पनि गालीगलौचमा यसैलाई प्रतीक बनाएपछि त कसले जाति हेरिरहन्छ र सबैलाई थोकमै घृणा गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ नै । यसैले पनि प्रायःले जुन जातको कुकुर पाले पनि घृणा नै गर्छन् र भन्छन् ‘भुसिया कुकुर’ ।
पहिले पहिले यसको आबादी प्रचुर हुन्थ्यो, तर घरघरमा शौचालय बनेपछि आजकल यिनले पेटको जठराग्नि शमन गर्न बाख्रा, कुखुरा र बाच्छाहरुलाई निशाना बनाउन थालेको भनेर एक जना कविजीले नवलपुरका सञ्चारगृहलाई गुनासो सुनाउनुभएको हिजोजस्तो लाग्छ । यस्तो भय र आतङ्कको कथा मैले काठमाडौँको गोठाटारतिर पनि नसुनेको होइन । यो उनीहरुको बाध्यता, सनक वा मांस भक्षण गर्ने इच्छाको प्रतिफल पनि हुनसक्छ । आजकल यिनीहरुको आबादीमा कमी भने आएको हो कि झैँ लाग्छ । यदाकदा साथीहरुसँग भलाकुसारीका क्रममा घरेलु जनावरको सङ्ख्या घट्दै गएको प्रसङ्गमा भँगेरारुपी आदि चराझैँ कुकुरको पनि सङ्ख्या घटेको चर्चा चल्दा एक–दुई साथीले सहरतिर बिक्रीवितरण गरिने मासुमा विश्वसनीयता नरहेको प्रसङ्ग उद्धृत गर्ने गर्दछन् । त्यसो त, हामीले भेँडाबोकालाई सहजरुपमा उपभोग गरेभैmँ कोरियातिर यसलाई सहजै उपभोग गरिने सुनिन्छ । जे होस्, भुसिया कुकुरको सङ्ख्यामा भने निकै कमी आए पनि कुनै बेला हुँदाखानेहरुको सङ्ख्या हुनेखानेहरुमा परिणत हुँदै गएपछि ओच्छ्यान, भान्सा, काख, गाला र ओठहरुमा जुकाझैँ टाँसिन पाउने भाग्यमानी जातका कुकुरहरुको सङ्ख्यामा भने रात दुई गुना र दिन चौगुना बढ्दै गएको छ ।